प्रहरीलाई नै चकित पार्ने मोटरसाइकल चोर, २ दिनमै फेर्छन् पार्टपुर्जा
काठमाडौं – गत जेठ ३० गते साँझ चाबहिल चोकमा पार्किङ गरेको मोटरसाइकल चोरी भयो । बजाजको २२० सीसीको पल्सर बाइक कालोरातो रङको थियो ।
प्रदेश नम्बरमा निकालेको २० दिनमै चोरी भयो मोटरसाइकल । हराएको अर्को दिन ३१ गते मोटरसाइकल धनी श्याम (नाम परिर्वतन) ले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा बग्गीखानामा निवेदन दिए ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरीको चोरी नियन्त्रण गर्ने शाखाले सादा पोशाकका ट्राफिक प्रहरीको टोली मोटरसाइकल खोजीमा खटायो ।
मोटरसाइकल चोरी भएको ३ दिनपछि असार १ गते २७ लटको शंकास्पद बाइकलाई सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए । शंकास्पद मोटरसाइकलमा हालसालै आएको मोटरसाइकलको पार्टपुर्जा देखिएपछि नियन्त्रणमा लिइएको थियो । प्रहरीले सँगै मोटरसाइकल धनीलाई पनि नियन्त्रणमा लियो ।
छानबिनका क्रममा ट्राफिक प्रहरीले शंकास्पद मोटरसाइकलका धनीलाई सोध्यो –
– तपाईंले पुरानो बाइकमा किन नयाँ पार्टपुर्जा फेर्नुभएको ?
– प्राविधिक परीक्षण गरेर पार्टपुर्जा फेर्नुभएको हो कि ?
– तपाईले सवारी दुर्घटनामा परेर फेर्नुभएको हो कि ?
ट्राफिक प्रहरीले प्रश्नै–प्रश्न तेस्र्यायो । त्यसपछि मोटरसाइकल धनीले एउटा बयान दिए । उनले भक्तपुरमा रहेको साथीको ग्यारेजमा मोटरसाइकलको पार्टपुर्जा फेरेको बताए ।
प्रहरीको शंका थियो – शंकास्पद मोटरसाइकलमा भेटिएका पार्टपुर्जा कतै ३० गते हराएको मोटरसाइकलका त होइनन् ?
प्रहरीले थप प्रष्ट हुन खोज्यो । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका मोटरसाइकल धनीसहित सादा पोशाकका ट्राफिक प्रहरी पार्टपुर्जा फेरेको ग्यारेजतर्फ लागे । यसबीच प्रहरीलाई हराएको मोटरसाइकल पाइन्छ कि भन्ने आशा पलाउँदै थियो ।
ग्यारेजमा पुग्दा प्रहरी अचम्ममा पर्‍यो । ग्यारेजमा ३० गते हराएको मोटरसाइकलको ‘अस्थिपञ्जर’ र ‘च्यासिस’ नम्बर टुक्रा–टुक्रा अवस्थामा फेला पर्‍यो । चोरी भएको ३ दिनमै सबै पार्टपुर्जा अर्को मोटरसाइकलमा फेरिएको प्रहरीले फेला पार्‍यो । मोटरसाइकल हराएको उजुरीमा रहेको ‘च्यासिस’ नम्बर ठ्याक्कै मेल खायो ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मोटरसाइकल र हराएको निवेदन परेको मोटरसाइकलको च्यासिस नम्बर र इन्जिन नम्बर मिलेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तकुमार पन्तले लोकान्तरलाई बताए ।
‘वास्तविक सवारी धनीले निवेदन दिँदा आफ्नो सवारीको सम्पूर्ण विवरण निवेदनका साथमा दिनुपर्छ । त्यो विवरण महाशाखाको कम्प्यूटरमा अभिलेख हुन्छ । शंका लागेको सवारीको विवरण मेल खाएका सवारीसहित मानिसलाई पनि नियन्त्रणमा लिन्छ,’ उनले भने ।
च्यासिस नम्बर र इन्जिन नम्बर मिलेपछि प्रहरीले ग्यारेज साहुलाई पनि नियन्त्रणमा लियो । सँगसँगै मोटरसाइकलको च्यासिस र इन्जिन पनि प्रहरीले बरामद गर्‍यो ।
मोटरसाइकलमा पार्टपुर्जा फेर्ने र फेराउने दुवैलाई ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले थप अनुसन्धानको लागि अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेकुमा पठाएको छ ।
मोटरसाइकल चोरी हुने क्षेत्र
काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल चोरी हुने क्षेत्रको रुपमा बौद्धलार्ई लिइने ट्राफिक प्रहरीका एक हवल्दारले बताएका छन् । ‘सबैभन्दा धेरै त बौद्धबाट हराउँछ । बालाजु, नयाँ बसपार्क, चावहिल, कोटेश्वर, न्यूरोड लगायत भीडभाड हुने सबैजसो ठाउँबाट मोटरसाइकल हराउने गरेका छन्,’ उनले भने ।
कति हराए मोटरसाइकल ?
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ हजार ४ सय ४४ वटा मोटरसाइकल हराएको निवेदन ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा परेका छन् । जसमा ३ सय ४५ वटा मोटरसाइकल अनुसन्धानमा ल्याइएको छ । ल्याएका मोटरसाइकलमध्ये २ सय ४१ वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित सवारीधनीलाई बुझाइएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तराज पन्तले बताए ।
अन्य ४८ वटा मोटरसाइकलसहित ६७ जनालाई चोरी कसूरमा मुद्दा चलाउन अपराध महाशाखा र ४२ वटा मोटरसाइकल भन्सारमा पठाएको पन्तले लोकान्तरलाई बताए ।